မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ အတွဲလိုက်မိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့်..See more. .. – Messi Club
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ အတွဲလိုက်မိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့်..See more. ..
ဘင်ျဂလားဒရှျေ့ နိုငျငံ အနောကျမွောကျဘကျ Shibganj မွို့တှငျ မင်ျဂလာဆောငျပှဲကငျြးပနသေညျ့ ပါတီပှဲအတှငျး Panama River မွဈကမျးဘကျမှ မိုးကွိုးမုနျတိုငျးမြား အတှဲလိုကျပဈခခြဲ့သဖွငျ့ နောကျဆုံးသတငျးအရ
လူပေါငျး ၁၇ ဦးသဆေုံးပွီး သတို့သားအပါအဝငျ ၁၂ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့တယျလို့ The New York Time သတငျးစာတှငျဖျောပွခဲ့ပါတယျ။သတို့သား အပါအဝငျ ကနျြ လူ ၁၄ ယောကျလညျး ဒဏျရာရရှိသှားကွပါတယျ။
သတို့သမီးကတော့ ရှိမနတေဲ့ အတှကျ ဘာမှမဖွဈခဲ့ပါဘူးShibganj မွို့ရဲ့ မွဈဆိပျမှာ သတို့သမီး အိမျဆီ သှားဖို့ ရောကျလာကွတဲ့ သတို့သားနဲ့ အဖှဲ့တှေ လှပေျေါက အဆငျးမှာ မိုးကွိုးမုနျတိုငျးတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒဏျရာရရှိသူတှကေိုတော့ Meherul Islam ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျကုသထားပွီး ဆေးရုံတာဝနျခံ Mr. Hossain မှလညျး သဆေုံးသူ ၁၇ ဦးအထိရှိသှားပွီဖွဈကွောငျး အတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။အဲဒီအဖှဲ့ထဲကို မိုးကွိုးအခကျြတျောတျောမြားမြား ပဈခလြိုကျတာ ဖွဈတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောကွပါတယျ။
တောငျအာရှ ဒသေမှာ နှဈစဉျ မိုးကွိုးပဈခံရလို့ သဆေုံးရသူ ရာပေါငျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတှငျ နှဈစဉျမိုးကွိုးမုနျတိုငျးပဈခတျမှုကွောငျ့ လူပေါငျးရာခြီသဆေုံးလရှေိ့ပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈ မလေ တဈလအတှငျး မိုးကွိုးပဈခံရမှုကွောငျ့ လူပေါငျး ၈၂ ဦးအထိသဆေုံးခဲ့ပွီး တဈနှဈအတှငျး လူပေါငျး ၂၀၀ ကြျောသဆေုံးခဲ့ပွီး
တရကျတညျးမှာတငျ လူ ၈၂ ဦးအထိ သဆေုံးခဲ့ရတာကွောငျ့ အစိုးရက မိုးကွိုးပဈတာကို သဘာဝဘေးအန်တရာယျအဖွဈတောငျ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ။အထူးသဖွငျ့ အပူရှိနျအမွငျ့မားဆုံးနှငျ့ဥတုအပွောငျးအလဲဖွဈတတျသညျ့ မတျလ ၊ မလေနှငျ့ဇူလိုငျလမြားတှငျ မိုးကွိုးမြားပဈခခြံရလရှေိ့ပါသညျ ။
ကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ တောပွုနျးလာတာတှကွေောငျ့လညျး ပါတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ အရငျက မိုးကွိုးအပဈခံရလေ့ ရှိတဲ့ အပငျမွငျ့ကွီးတှေ ပြောကျကှယျသှားတာကွောငျ့ အခုလို မိုးကွိုးပဈခံရတဲ့ လူအသအေပြောကျနှုနျး တကျလာတာ ဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက် Shibganj မြို့တွင် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေသည့် ပါတီပွဲအတွင်း Panama River မြစ်ကမ်းဘက်မှ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ အတွဲလိုက်ပစ်ချခဲ့သဖြင့် နောက်ဆုံးသတင်းအရ
လူပေါင်း ၁၇ ဦးသေဆုံးပြီး သတို့သားအပါအဝင် ၁၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ The New York Time သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတို့သား အပါအဝင် ကျန် လူ ၁၄ ယောက်လည်း ဒဏ်ရာရရှိသွားကြပါတယ်။
သတို့သမီးကတော့ ရှိမနေတဲ့ အတွက် ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးShibganj မြို့ရဲ့ မြစ်ဆိပ်မှာ သတို့သမီး အိမ်ဆီ သွားဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ သတို့သားနဲ့ အဖွဲ့တွေ လှေပေါ်က အဆင်းမှာ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ Meherul Islam ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကုသထားပြီး ဆေးရုံတာဝန်ခံ Mr. Hossain မှလည်း သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးအထိရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။အဲဒီအဖွဲ့ထဲကို မိုးကြိုးအချက်တော်တော်များများ ပစ်ချလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်။
တောင်အာရှ ဒေသမှာ နှစ်စဉ် မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ သေဆုံးရသူ ရာပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်းရာချီသေဆုံးလေ့ရှိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ တစ်လအတွင်း မိုးကြိုးပစ်ခံရမှုကြောင့် လူပေါင်း ၈၂ ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး
တရက်တည်းမှာတင် လူ ၈၂ ဦးအထိ သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့် အစိုးရက မိုးကြိုးပစ်တာကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်တောင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ။အထူးသဖြင့် အပူရှိန်အမြင့်မားဆုံးနှင့်ဥတုအပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်သည့် မတ်လ ၊ မေလနှင့်ဇူလိုင်လများတွင် မိုးကြိုးများပစ်ချခံရလေ့ရှိပါသည် ။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ တောပြုန်းလာတာတွေကြောင့်လည်း ပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရင်က မိုးကြိုးအပစ်ခံရလေ့ ရှိတဲ့ အပင်မြင့်ကြီးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့် အခုလို မိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့ လူအသေအပျောက်နှုန်း တက်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။